Vibenomics Audio Out-Of-Home Advertising: Mozika sy hafatra mifototra amin'ny toerana manokana | Martech Zone
Dokam-barotra ivelan'ny trano Vibenomics Audio: Mozika sy hafatra mifototra amin'ny toerana manokana
Asabotsy 24 Febroary 2018 Talata, Martsa 8, 2022 Douglas Karr
Nanana olana ny tale jeneralin'ny Prime Car Wash Brent Oakley. Nandresy lahatra ny fanasan'ny fiarany, saingy raha niandry ny fiarany ny mpanjifany, dia tsy nisy olona nisarika azy ireo tamin'ny vokatra sy serivisy vaovao natolony. Namorona sehatra ahafahany mirakitra hafatra manokana sy mozika mifototra amin'ny toerana ho an'ny mpanjifany.
Rehefa nanomboka nampiroborobo ny fanoloana fanasan-damba tamin'ny alàlan'ny onjam-peo in-store izy dia nivarotra solo-soloina betsaka kokoa tao anatin'ny iray volana noho izay namidiny tao anatin'ny dimy taona lasa. Fantatr'i Brent fa tsy nanana vahaolana ho an'ny mpanjifany fotsiny izy, nanana sehatra nilain'ny indostria izy. Niala tamin'ny orinasan-fanasana fiara àry izy ary nanomboka Vibenomics.
Vibenomics dia orinasa dokam-barotra Audio Out-of-Home ™ miorina amin'ny toerana izay manome hery ny fantsona audio ho an'ny mpivarotra, manome ny marika afaka miresaka mivantana amin'ny mpividy eo amin'ny toerana fivarotana. Miaraka amin'ny haitao matanjaka miorina amin'ny rahona, tranomboky mozika lafika nahazoana alalana, fahaiza-mitambatra angon-drakitra, ekipa feno serivisy manam-pahaizana momba ny traikefa amin'ny feo, ary tambajotra manana talenta matihanina amin'ny feo, ny orinasa dia manome vibe mampisondrotra fidiram-bola mety ho an'ny mpanao dokam-barotra 150 mahery toerana mihoatra ny 6,000 manerana ny fanjakana 49, mahatratra 210 tapitrisa ny olona.
Matetika ny fivarotana antsinjarany no mandoa vahaolana amin'ny mozika nahazoana alalana, fa ny Vibenmoics dia tena manolotra vahaolana mozika sy hafatra izay misy fiverenana amin'ny fampiasam-bola.
Vibenomics dia manome ny orinasa hidirana amin'ny tranomboky mozika manana lisansa feno ary fampiharana mora ampiasaina izay ahafahan'izy ireo mandefa sy mandray fanambarana voarakitra an-tsoratra manokana amin'ny andro iray ihany no angatahanao azy ireo. Tsy mila manahy momba ny bandwidth na olana ara-teknika akory ny orinasa – mandeha amin'ny takelaka mandeha amin'ny Sprint ny sehatra. Ampidiro fotsiny ilay izy, dia mitsangana ianao!
Naterina tamin'ny alalan'ny plug-and-play mora vidy, manana, IoT afaka mpilalao haino aman-jery, Vibenomics dia mandefa amin'ny fomba mavitrika ireo dokam-barotra amin'ny feo hyper-kendrena, on-demand ary playlist voarindra ao anatin'ny fitambaran'ny toerana manerana ny dian-tany mitombo haingana, manokatra fantsom-barotra vaovao mahery vaika. ho an'ny fanatratrarana ny mpanjifa mandritra ny dian-tongotra farany manakiana amin'ny lalana hividianana. Amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa mpiara-miombon'antoka voalohany amin'izy ireo, ny mpivarotra dia afaka mahazo ampahany amin'ny vola miditra amin'ny dokam-barotra rehetra amidin'ny Vibenomics izay milalao ao amin'ny toerana misy azy, manome azy ireo ny fahafahana manangom-bola amin'ny onjam-peo manokana ary manova ny fandaniana lova ho ivon-toeram-bola vaovao. .
Miaraka amin'ny Vibenomics, ny orinasa dia afaka mitarika valin'ny orinasa:
Mandrosoa haingana ny vokatra ary ampitomboy ny mety ho fidiram-bola isaky ny mpanjifa.
Ampianaro ny mpanjifa amin'ny vokatra sy tolotra vaovao rehefa misy izy ireo
Ento mankany amin'ny tranonkalanao ny mpanjifa hahazoana tapakila sy fampiroboroboana.
Tsy vitan'ny hoe afaka mamoaka ny hafatr'izy ireo manokana ny orinasa, fa afaka manokatra ny tambajotrany amin'ireo mpanao dokambarotra an'ny antoko fahatelo ihany koa! Jereo ny azy ireo vahaolana raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny hoe afaka manampy ny indostriao izy ireo.
Henoy ny tafatafa niarahanay tamin'i Brent Mangataha Demo Vibenomics
Tags: aoohaooh dokambarotrahafatraMusicOOHooh dokambarotradokam-barotra ivelan-tranotambajotram-peofeo antsinjaranyvibenomics
Inona ny Tripod Portable tsara indrindra amin'ny telefaona, fakan-tsary DSLR, GoPro, na mikrô?
Ahoana ny fomba fampiharana chatbot ho an'ny orinasanao